Umkhuleko kuSanta Anthony Wokuthola Uthando Lweqiniso [+ Strong]?
Umkhuleko kuSan Antonio ukuthola uthando, ukufuna uthando lweqiniso yinto egcina abantu abaningi bematasa futhi bekhathazekile. Lokhu yingakho kaningi bedinga ukwenza a umkhuleko kuSan Antonio ukuthola uthando, ukubasiza ukuthi bayithole.
Ukuqashelwa komuntu kuhlanganisa nokukwazi ukuqala imindeni yabo futhi ngenxa yalokhu, iningi, badinga umlingani ozohambisana nabo kuyo yonke inqubo.
Uthando lweqiniso selwenziwe ngentengiso, lwakhula kangangokuba isikhathi esiningi silindele imodeli ngqo yalokho abasithengisela khona kumamuvi, ezincwadini nasemphakathini uwonke.
Okokuqala kufanele siwushiye lowo mbono eceleni, uthando lungasimangaza ngendlela esingacabangi ngayo, ngakho-ke kufanele sizilungiselele futhi ngenhliziyo evulekile ukuyithola lapho sinquma ukufika.
Thandaza Ukuthola uthando lweqiniso kuzosisiza ukuba silinde isikhathi eside ngangokunokwenzeka futhi sazi ukuthi singalukhomba kanjani.
1 Umkhuleko kuSanta Anthony ukuthola uthando Ngabe unamandla?
1.1 Umkhuleko wokuthola uthando lweqiniso
1.2 Umkhuleko kuSanta Anthony wasePadua ukuthola uthando
1.3 Umkhuleko kuSan Antonio ukuthola uthando lwempilo yakho
2 Ngingasho yini imithandazo emi-3 kuSan Antonio?
Umkhuleko kuSanta Anthony ukuthola uthando Ngabe unamandla?
Inamandla futhi inamandla, ikakhulukazi uma ukwenze ngokholo nangokusuka enhliziyweni. Izwi leNkosi lisifundisa, kwelinye lama akhawunti akhe angenakubalwa kwesivumelwano esisha, ukuthi uthando lungenza konke, lindele konke, lubekezelele futhi alusoze lwaphela.
Ngale ndlela singazi ngokuqinisekile ukuthi ngabe uthando noma okunye okuzwakalayo. Abaningi bathi bayathanda futhi isikhathi siyayeka ukwenza kanjalo, lokhu, ngokwezwi likaNkulunkulu, akuyona isimilo.
Inhliziyo iyakhohlisa, ngaphezu kwazo zonke izinto. Imizwa iyaguquka ngenkathi uthando kuyisinqumo.
Ukuthandaza kuNkulunkulu umdali nokumcela ukuthi asiqondise ukuze sithathe isinqumo sokuthi ngubani ofanelwe uthando lwethu nokuthi ngubani ongafanele, kanye nokukhomba ukuthi ngubani onqume ukusithanda ngokweqiniso kubalulekile ngoba sigwema izimo ezingaba buhlungu.
Khumbula ukuthi cha umkhuleko owenziwa ngokukholwa ongaphendulwaa.
Kungathatha isikhashana noma impendulo ivela lapho sicabange khona okuncane, kepha kumele sibe nethemba lokwazi ukuthi uNkulunkulu wenza konke okusemandleni ethu futhi uyazi ukuthi ziyini izidingo zethu zangempela.
Umkhuleko wokuthola uthando lweqiniso
Nkulunkulu wami, Wena, njengomdali, unikeza impilo yazo zonke izidalwa. Wena obona konke futhi owazi konke, ungayeki ukuqondisa amehlo akho empilweni yami futhi ubone ukuthi kufanele ngithuthukise kanjani ukuze ngibe yilowo muntu ongaba nothando lweqiniso.
Uma isimilo sami singafaneleki kakhulu, uma indlela yami yokuphila neyokuphila ingezona izivumelwano zothando, ngitshele. Ake ungitshele enhliziyweni yami konke okufanele ngazi ngezwi lakho. Sondela endlebeni yami bese usho ukuthi kufanele ngenzeni. Ungangishiyi, usuku nosuku, ngilindele lolo thando oluqinisekile, ngaphandle kokwazi ukuthi yimi okufanele ngiguqule.
Nkulunkulu wezulu, Njengoba uphakeme futhi umangalisayo, ngithembela Kuwe. Ngiyazi ukuthi izwi lakho enhliziyweni yami linjengamanzi amsulwa ahamba emfuleni futhi ahlanze konke okusendleleni yawo. Ngilindele izwi lakho neseluleko sakho sonke. Ngibheke phambili ekubikezelweni kwakho. Ngifuna ukukwemukela ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngiyazi ukuthi bazoba nobulungiswa, bahlakaniphe futhi babe neqiniso, balungele impilo yami yothando.
Ngoba ukhona ubulungiswa, ukuhlakanipha neqiniso. Nkulunkulu wesibhakabhaka, ngiyakuthembisa ukuthi ngizosebenzisa amathiphu akho ochwepheshe nokuthi ngizohlala ngilandela indlela ongimaka ngayo. Ngiqondise kule ndlela ukuze ngazi ngqo indlela okufanele ngiyilandele, njalo ngokwemithetho yakho yothando. Ngithandazela ukuthi umlingani wami wesikhathi esizayo aqhubeke angihloniphe futhi angithande ngaphandle kwemibandela futhi angithande ngaphezu kwabo bonke abanye.
Lo mkhuleko kufanele wenziwe ushiye eceleni lokho esikuthandayo, kufanele sicabange ngalokho okubaluleke kakhulu kunemizwa, okuzoqhubeka iminyaka.
Uthando lungatholakala noma kuphi kepha uthando lweqiniso lwakhiwa usuku nosuku. Kungumsebenzi weqembu lapho esingathembela khona osizweni lukaMdali wazo zonke izinto.
Uma kungenzeka ukufezekisa uthando lweqiniso futhi uma sithembela amandla omkhuleko amathuba amakhulu kakhulu. Thandaza usebenzisa amagama ethu bese ulindela impendulo.
Umkhuleko kuSanta Anthony wasePadua ukuthola uthando
Ubusisiwe uSanta Anthony, onomusa kubo bonke abangcwele, uthando lwakho ngoNkulunkulu nothando lwakho ngezidalwa zakhe kukwenze wakufanelekela ukuba namandla amangalisayo.
Ngamazwi akho usize labo abanezinkinga noma izinkathazo nezimangaliso zenzeka ngokuncenga kwakho. Ngiyakuncenga ukuthi ungitholele ... (veza isicelo sakho).
Mnene omnene nesithandekayo, ngenhliziyo yakho ihlale igcwele ububele besintu, bhala isicelo sami kuMntwana oMnandi uJesu, obekuthanda ukuba sezandleni zakho, futhi uthole ukubonga okungapheli kwenhliziyo yami. (Thandaza abazali bethu abathathu kanye no-Joseph Ozithobayo abathathu.)
U-Anthony Anthony wasePadua ungcwele okufanele sithandaze kuye ukuze sithole uthando lweqiniso. Angakusiza ekutholeni uthando, isithandwa sakho somuntu, enye ingxenye, impilo yakho.
Ngomunye umuntu owadalelwa wena, ungangabazi ukuthi kunjalo.
Imikhuleko inamandla futhi isisize ukuqondisa amandla kahle ukuze singaweli ekuphelelweni yithemba noma iphutha lokukholelwa ekutholeni uthando lapho lungekho khona.
Umkhuleko kuSan Antonio ukuthola uthando lwempilo yakho
USanta Anthony, okhazimulayo futhi owaziwayo ngemimangaliso yakho, anginikeze isihe sikaNkulunkulu ukuba ngifeze isifiso sami (sokuthola umlingani).
Njengoba unomusa omkhulu kwizoni ezinjengami, ungabheki amaphutha ami, cabanga ukuthi Inkazimulo KaNkulunkulu iithethelele amaphutha ami, nginikeze isicelo engisenza kuwe ngokuqinile. Udumo luka-Anthony Anthony Wezimangaliso, induduzo yabahluphekile, ngicela amadolo akho ukuze uthole usizo lwakho nokuthi ube nguMhlahlandlela wami. Ngize kuwe ngesicelo futhi lokhu kuyikhulule inhliziyo yami ehluphekayo neyabonga.
Yamukela iminikelo yami yokuzinikela nothando kuwe. Ngivuselela isethembiso sami sokuphila ngokukuthanda, Saint Anthony, uNkulunkulu nomakhelwane wami.
Ngibusise ngesicelo sami, unginikeze umusa wokungena eMbusweni wezulu ngolunye usuku, ngikwazi ukucula isihe seNkosi kuze kube phakade.
USn Antonio uzokulalela futhi akusize kuyo yonke inqubo ukuze uthole uthando lwempilo yakho.
Lapho usuthole okufanayo, ungaqhubeka nokumcela ukuthi aqhubeke nokuqondisa izinyathelo zakhe nezinqumo zakhe ngaso sonke isikhathi.
Umkhuleko unamandla, kholwa futhi uthembe ukuthi uzokwenza konke okunye.
Ngingasho yini imithandazo emi-3 kuSan Antonio?
Ngabe ufuna ukukhuleka ngaphezu komthandazo wokuthola uthando lweqiniso?
Uyakwazi futhi kufanele athandaze yonke imithandazo ngaphandle kwemingcele. Bangathandazwa bonke ndawonye ngaphandle kwenkinga.
Khumbula ukuthi into ebaluleke kakhulu ukuthi ube nokholo oluningi kuNkulunkulu naseSan Antonio.
Ngale ndlela uzothola usizo oluphezulu kakhulu lokuthola uthando lwakho.